Ungakwenza Kanjani Ukungena Kwesikhashana Ku-WordPress Ngesixhumanisi Esiqondile | Martech Zone
Ungakwenza Kanjani Ukungena Kwesikhashana Ku-WordPress Ngesixhumanisi Esiqondile
Ngisebenze kumakhulu amaklayenti nge-WordPress, amatimu athuthukayo, ama-plugin, ukuhlanganiswa, njll. Ngokwengxenye enkulu, itimu ezanyiwe yavivinywa noma i-plugin enezilinganiso ezinhle nedumela lisebenza ngaphandle komthungo kusayithi leklayenti. Kodwa, njalo nje, i-plugin noma itimu izophonsa isiphazamisi noma ingase yehlise isayithi ngokuphelele.
Kuleli sonto, empeleni ngibe nenkinga esizeni sethu sebhizinisi lapho kubuyekezwa khona I-plugin ye-Elementor (engiyincoma kakhulu njengomakhi wekhasi elibonakalayo) iqale inqubo yokuvuselela izilungiselelo kusizindalwazi. Inqubo iqale kodwa ayizange iqede… futhi uma ngichofoza kuyo ukuze ngiyiqedele mathupha, isayithi lami lingenza iphutha.
Ngithinte ithimba labasekeli e-Elementor njengoba bekungekho engingakwenza ukuze ngilungise inkinga. Basabela ngokushesha futhi bacela ukufinyelela kwesikhashana kusayithi ngezimvume zokuphatha futhi bancoma ukuthi Ukungena Kwesikhashana Ngaphandle Kwe-plugin Yephasiwedi, i-plugin eyakhiwe ngabakwa Gcina izinhlelo zokusebenza iqembu.
Ukungena Kwesikhashana Ngaphandle Kwephasiwedi Ye-WordPress Plugin
Phakathi nemizuzu embalwa, ngalayisha futhi ngenza i-plugin yasebenza, futhi ngaba ne-URL eqondile yokungena ethikithini elibanike ukufinyelela ababekudinga. Okuhle kunakho konke, bekungadingi ukubhaliswa kubo nhlobo.
Lena i-plugin enhle ngoba ayidingi ukuthi ubuyele emuva futhi ususe i-akhawunti oyidalile, okukwenza ube sengcupheni yenqwaba yama-akhawunti angasetshenziswa okungenzeka anamagama ayimfihlo okugetshengwa kalula.
I-plugin iyikho konke okudingayo, inikeza izici ezilandelayo:
Dala okungenamkhawulo ukungena kwesikhashana
Dala ukungena kwesikhashana nganoma yikuphi indima
Alikho igama lomsebenzisi nephasiwedi ezidingekayo. Ngena ngemvume nge-a isixhumanisi esilula
Misa ukuphelelwa yisikhathi kwe-akhawunti. Ngakho-ke, umsebenzisi wesikhashana akakwazi ukungena ngemvume ngemva kokuphelelwa yisikhathi
Izinketho ezihlukahlukene zokuphelelwa yisikhathi njengosuku olulodwa, isonto elilodwa, inyanga eyodwa, nokunye okuningi. Futhi, setha idethi yangokwezifiso
Phinda uqondise kabusha umsebenzisi ekhasini elithile ngemuva kokungena ngemvume
Setha i- ulimi okomsebenzisi wesikhashana
Bheka ugcine ukungena ngesikhathi yomsebenzisi wesikhashana
Bona kangaki umsebenzisi wesikhashana ufinyelele ukusetha kwakho
Ngihlabeke umxhwele kakhulu nge-plugin engiyengeze ohlwini lwethu Ama-plugins we-WordPress ahamba phambili kusayithi lakho lebhizinisi.
Ukungena Kwesikhashana Ngaphandle Kwe-Plugin Yephasiwedi
Ukudalulwa: Ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuxhumana se- Elementor kulesi sihloko.
Tags: dala isixhumanisi sokungenadala ukungena kwesikhashanaukungena ngemvume okuphelelwa yisikhathiindlelaUkuphelelwa yisikhathi kokungena ngemvumeizinhlelo zokusebenza zesitoloukuxazulula inkinga wordpressukungena ngemvume komsebenzisiWordPressI-wordpress loginukuphepha kwe-wordpress
Amagama Omugqa Wesihloko Se-imeyili Acupha Izihlungi Zogaxekile Futhi Akuhambise Kufolda Ye-Junk